अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : नेता रिमाल - Aathikbazarnews.com अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : नेता रिमाल -
woodlands primary homework help history cal state la creative writing elf creative writing university of oklahoma mfa creative writing curriculum vitae online creator calgary phd creative writing primary homework help ww2 online cover letter maker ma creative writing kingston term paper writing sites research paper for sale online write my dissertation online creative writing group milton keynes best university for creative writing in australia creative writing valued for esthetic content lancaster university english literature and creative writing english department creative writing harvard fun creative writing warm ups thesis assignment help creative writing ncc creative writing camp rice creative writing john moores how to teach my child creative writing creative writing describing sweat getting into an mfa creative writing program uncg creative writing major 5-91 homework help the right career for me essay i do my homework auf deutsch how critical thinking helps in decision making
नेपाल आयल निगम अब डिजिटल प्रणालीमा
नेप्सेले गर्यो आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन
नर्भिक अस्पतालको २८ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौंबाटै कन्ट्रोल गर्न सकिने ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन
२०७७ लाई फर्केर हेर्दा…
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ् वृद्धि गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
आर्थिक बजार न्यूज डटकमको समाचारको चर्को प्रभाव, बीमा समितिद्वारा बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुलाई कर्जा दिएर बीमा लेख तयार नर्गन कडा निर्देशनः यस्तो अनैतिक काम गरेको भेटिएमा ठाउँको ठाउँ कारवाही ?
बैंकहरुले हचुवाको भरमा र सोसफोर्समा दिएको अनुदानको अर्बै कृषि कर्जामा व्यापक लुटको खेतीः राष्ट्र बैंक बेखबर
उनेल्मा पे’को अवैध धन्दा राष्ट्र बैंक मुखदर्शक ?
फेरि आयो कडा निर्देशन, जीवन बीमा कम्पनीहरु तनाबमाः एकल बीमा लेख ३ वर्षसम्म खारेज गर्न नपाईने, अभिकर्ताहरुलाई कर्जामा निषेध !
फेरि संकटमा तरलता अभाव, व्याजदर र शेयर बजारः राष्ट्र बैंक बेखबर !
एनआईसी एशिया बैंकका सिईओे ‘प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ)’ बाट सम्मानित
सोमवार, मंसिर ८, २०७७
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ । कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण ः
मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीविरुद्धको यो घेराबन्दी अहिले एकाएक आएको होइन । मूलतः यो घेराबन्दीको क्रम वर्तमान सरकारको दुई वर्ष पुगेको समय ( २०७६ फागुन ३ ) देखि यो वा त्यो रुपमा आरम्भ भएको देखिन्छ । त्यसपछि निरन्तर सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट विरोधको शृङ्खला मुखरित भएको हो ।
बाहिर सतहमा आएका विषय हेर्दा सरकारलाई यसरी पार्टीभित्रैबाट विरोध गर्नुपर्ने र काम गर्न नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन । ती विषय छलफल गरेर हल गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको विरोध र आरोपपत्रमा अराजनीतिक आग्रह, आवेग र कुण्ठा मिसिएको छ । समस्या वा कमजोरी छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तर आवेग मिसिएको विरोधको नियत सही हुँदैन । त्यो एकताको भावनाविरुद्ध हुन जान्छ । खासगरी तत्कालीन दुई पार्टी गठबन्धनका हैसियतले गत निर्वाचनमा जाँदा आमकार्यकर्ता एकै पार्टीसरहका हिसाबले प्रचारमा खटेर लागेको भुल्नु हुँदैन । जनमतमा पनि त्यही भावना प्रकट भयो ।
शायद यही भावनामा टेकेर दुई अध्यक्षले एकताको आवश्यकता र औचित्यबारे आआफ्ना केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव राख्नुभयो र एकता भयो । एकता गरिरहँदा त्यहाँ लोकप्रिय मतका आधारमा पूर्वघटकको हिस्सा सुनिश्चित गरेर कुनै भागबण्डा गरिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम पनि हिसाब गरिएन । यसमा केवल दुई धारको एकता हो र यसमा मन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने भावनाले प्राथमिकता पायो । नेता वा सदस्यको टाउको गन्ती गरेर, बहुमत वा अल्पमत मिलाएर त्यसबेलाको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा गरिएको एकता यो होइन ।
हिसाब नै गरिएको भए गत सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले पाएको ३३ लाख र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाएको ११ लाख हाराहारीको मतलाई आधार मान्ने हो भने ७५÷२५ प्रतिशत हिस्साका आधारमा एकता गरिन्थ्यो होला तर त्यसो नगरी ६०÷४० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिटी बनाइए । यो एकता विगतमा भएका कम्युनिष्ट पार्टीका एकता वा परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचाभन्दा पृथक किन पनि छ भने यसमा केही मौलिक विधि र विधान बनाइएका छन् ।
जस्तो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जनवादी केन्द्रीयताअन्तर्गत अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्ने आदि विषय अहिलेलाई थाँती राखिएका छन् । एकता महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिमा गर्ने भनिएको छ । विसं २०७५ जेठ ३ मा एकता घोषणा हुँदा दुई वर्षभित्र गरिने महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको थियो । हामीले तोकिएका समयमा एकताका काम पूरा गर्न सकेनौँ र कोभिड–१९ लगायत कारण दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तमा गर्ने गरी गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्धारण गरेको छ । सोही बैठकले पार्टीभित्रका विवाद समाधान गरेर भदौ २९ मा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको हो ।
मैले भनेँ कि, हाम्रो पार्टीमा एकतापछि यसको सञ्चालनका आफ्नै विधि छन् । यसका अन्तरिम विधान र दुई अध्यक्षको सहमतिका आधारमा प्रस्ताव तयारी तथा निर्णय गर्ने विधि र अभ्यास छन् । यसबीचमा केही नेताहरु आफूआफू बसेर छलफल गर्ने अनि त्यसलाई पार्टीको बैठकमा ल्याएर गुटका आधारमा निर्णय गराउने शैलीमा उत्रनुभयो ।
अहिलेको उखडबाखड त्यही हो । एक अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई लाञ्छित गरेर सचिवालयको बैठकमा पुष्टि हुन नसक्ने खालका लिखित आरोपहरु वितरण र प्रचार गर्ने गलत काम भयो । यसले पार्टीभित्रको सहमतिको विधि र मान्यता भत्काएको छ । यो विग्रहको बाटो भयो । यसरी जानु हामीले बाटो भुल्नु हो । आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले बहुमतको खोजी वा टाउको गन्ती गरेर निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कामप्रति स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश नेताहरु सहमत छैनन् । त्यसका आधारमा पार्टी एकता र सहमतिलाई तलमाथि पार्ने काम स्वीकार्य छैन ।
तपाईँहरुलाई थाहै छ, एक वर्षअघि मङ्सिर ४ गते दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यविभाजन भएको हो । अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता र अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाका हिसाबले काम गर्ने भन्ने भएको हो । उक्त सहमतिको प्रतिबिम्बन गत माघ १४ देखि १८ गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा देखियो पनि ।
केन्द्रीय कमिटीले समग्र पक्षको समीक्षा गरी सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने र राम्रा कामलाई जनस्तरमा लाने तथा पार्टीका सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर फागुन लागेपछि जब सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्यो, त्यसपछि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न संविधानले दिन्छ भन्ने खालका अखबारबाजी गरिए ।
केही साथीहरुले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्नुभयो । विरोधहरु सुनिन थाले । त्यसयता विश्वव्यापी महामारीका रुपमा कोरोना भाइरस हामीले सामना गरिरहेका छौँ । त्यहीबीचमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा लामो छलफलपछि कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा भदौ २६ गतेभन्दा अगाडिका विवाद, कमजोरी र समस्यालाई ‘कट अफ डेट’ मानेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको सबैलाई थाहा छ । अहिले पनि स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरु त्यही निर्णयको कार्यान्वयनका पक्षमा हुनुहुन्छ ।
त्यस कारण उक्त निर्णयको पृष्ठभूमिमा विधि, पद्धति र नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढङ्गले अहिले नयाँ बखेडा झिकिएको छ, यो नितान्त अराजनीतिक र औचित्यहीन छ । कार्यकारी भूमिकामा अध्यक्ष दाहालको जिम्मेवारी रहने भनिए पनि विधानतः दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन् । दुवैको सहमतिविना कुनै पनि कार्यसूची तर्जुमा हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरी हुन सक्छन् र त्यस्ता कुराहरु भएमा समीक्षा गरौँ भन्दै आउनुभएको छ तर मन्त्रिमण्डलको हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा मापदण्डका आधारमा दुई अध्यक्षले परामर्शमा गर्ने भन्ने भएको हो । अध्यक्षद्वयको छलफल हुँदा पुनःगठनका केही आधारहरु, जस्तो ः सबै मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई बिदा दिने वा आवश्यकतानुसार थपघट गर्ने भन्नेबारेमा परामर्श भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका आफूसरहका योगदान गरेका साथीहरु (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) लाई हटाउने वा हटाएर पुनः ल्याउने काम नगरौँ भनी स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । सबै मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्नेमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले रिक्त तीन मन्त्रालयका नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो दिन ‘गो अहेड’ भन्नुभयो तर भोलिपल्ट बिहान आएर हाल अर्थमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न भन्नुभयो ।
त्यतिबेला तीनै जना मन्त्री नियुक्तिका लागि तयारी भएर राष्ट्रपतिसमक्ष नाम गइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको हो । अन्य मन्त्रीका हकमा दशैँतिहारपछि विचार गर्न प्रधामन्त्री तयार हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री नभएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । यो छलफलकै क्रममा छ ।
राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेका कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ । डा युवराज अतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा अध्यक्ष दाहालकै प्रस्ताव हो । निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउने पनि सहमति र जानकारीमै भएकै हो ।
प्रधानमन्त्रीले परामर्श भएको हो भनिसकेपछि यति कुरामा उहाँले ढाँट्नुभयो होला भनेर कसरी भन्ने ? मन्त्रिपरिषद्मा अर्काे एक जना पनि राजदूतका लागि सिफारिश आउँदा प्रधानमन्त्रीले यसमा परामर्श हुन बाँकी छ भन्नुभएको पनि मन्त्रीहरुबाटै आएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी वा एक्लै गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ । त्यही क्रममा समावेशिताका आधारमा पनि राजदूत नियुक्ति होस् भन्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्देशनसमेतका आधारमा दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत तय हुन पुगेको हो । यसबारे पनि अर्का अध्यक्षलाई त्यतिबेलै सम्पर्क भएको मैले बुझेको छु ।
विगतमा सरकार प्रमुख, पार्टी प्रमुख र वरिष्ठ मन्त्री भइसकेका नेताहरुका लागि यस्ता भेटघाटबारे बुझाइरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । शिष्टाचार भेट गर्न आउने एउटा क्रम हुन्छ । अर्काे, कुनै देशले प्रतिनिधिका रुपमा वार्ता वा छलफलका लागि पठाउने गर्छ । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरेर शुभकामना दिने क्रममा दुई देशको सीमा विवादबारे छलफलको प्रस्ताव गर्नुभयो ।
जवाफमा मोदीले आफूले विशेष दूत पठाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको हो । अर्काे देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग भेट्न फलानो व्यक्तिलाई पठाइदिनू भनेर त भन्न मिल्दैन होला ! सोहीबमोजिम भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएर भेटेर जानुभयो । त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोट टिपाइएको छ, भेटबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा एक प्रकारको वार्ताको थालनी भएको छ, यसमा त नेताहरुले सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली जस्तो स्वाभिमान व्यक्तिको राष्ट्रवादमाथि हिलो छ्याप्न खोज्नु आफ्नै अनुहारमा कोपर्नुसरह हो । सीमा समस्या समाधान भएर प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता बढ्दा पार्टीको पनि लोकप्रियता बढ्ने होइन र ? अहिले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो कुनै बेला यहाँका खुफिया एजेन्सीका निर्देशक थिए, अनि के उहाँ आएर भेटवार्ता गर्नुभयो भने अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई किन भेट्यो भन्ने ?
उहाँले सचिवालयमा जवाफ दिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसलाई सचिवालयले अनुमति दिएको छ । उहाँले दिने जवाफमा अहिल्यै अन्दाज गरेर बोल्न उपयुक्त हुँदैन तर उहाँले मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा पनि भनिसक्नुभएको छ, आफूविरुद्धको अराजनीतिक आरोपत्र अस्वीकार्य छ, छलफलका लागि योग्य नभएका त्यस्ता लाञ्छना पुष्टि हुँदा आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा बसिरहन मिल्दैन र यदि आरोप पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेले जवाफदेहिता लिनुपर्छ ।
फेरि पनि उहाँले मिलेर जाऔँ भन्नुभएको छ । आरोप लगाउने नेताहरुले त्यस प्रस्तावलाई मित्रताको ठाउँ राखेर ल्याउनुभएको हो वा वार कि पारको हिसाबले ल्याउनुभएको हो, पहिला त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीको एकता र सहमतिको यात्रा तय हुन्छ । अध्यक्ष ओली पार्टी एकता र निष्ठाको पक्षधर हो ।
उहाँ विभाजन चाहनुहुन्न । उहाँले विगतमा पनि २०२८ सालदेखि धुजाधुजा भएको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्नुभएको छ । लोकतन्त्रका खातिर उहाँ १५ वर्ष कठोर जेल जीवनमा बस्नुभयो । पञ्चायत सरकारका पक्षमा कुनै कागज गरिदिएको भए उहाँ रिहा हुन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता गर्नुभएन ।
यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) मा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ ।(रासस)
१५ प्रतिशत लाभांशले ३ लाख १७ हजार सेयरधनी लाभान्वित भएका छन् : सीईओ उपाध्याय
कोरोनाको डर घटेको अवस्था छ । कोरोना घटेको अवस्था होइन । कोरोनाको डर हटेको अवस्था हो । त्यो डर घट्नु भनेको हामी फेरि पुरानो शैलीतिर फर्कदै छौं । त्यसकारण ग्राहकले सजिलो मान्ने र सहज शुल्क भयो भने डिजिटल कारोबार बढ्दै जान्छ (भिडियो सहित)
मैले २८ वर्ष देशभरका उद्योगी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेको छु मेरो जित सुनिश्चित छ
सिआइपी सम्मान पाउने नै हामी चारजना पदाधिकारीका उम्मेदवारमध्ये दुई जना नै छौँ । यो पनि हामीले चुनाव जित्ने धेरैमध्येको एक आधार हो
आयल निगमको सुधार प्रयासमा व्यवसायीको भाँजो
शिखरको ‘अटो प्लस बीमा’मा आकर्षण बढ्दो, के के पाइन्छ सुविधा ?
मलेखु बजार बन्यो डिजिटल बजार, क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकका ९ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
नबिल बैंकले ल्यायो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न मिल्ने “नबिल iCard”
[1.5] Bike Mayhem Mountain Racing Mod APK
cialis “İnsanı utandıran
viagra satın al Ofis ve
Cialis – cialis5mg – Bu farklılıklar karş
kamagra Ancak bayıltan
en etkili ereksiyon ilacı
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा कल्यानपुर भेडीयामा
महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा १५ प्रतिशतले वृद्धि
प्रभु पेको क्युआर प्रयोग गरि ग्यापुमा सपिङ गर्दा १० प्रतिशत क्यास ब्याक र मोबाइल टिभी सित्तैमा
सेञ्चुरी बैंकद्वारा विद्यालयलाई फिल्टर सहयोग
नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्वारा मुस्कान सेवा नेपाललाई सहयोग प्रदान
एनआरएनएको ९औं विश्व सम्मेलन सुरु
गभर्नर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका नोट पहिलो पटक बजारमा
साल्ट ट्रेडिङ्गको २५ प्रतिशत बोनस शेयर स्विकृत